चट्टान पहिलो हुन्छ
रकस्टारका साथ विशेष साक्षात्कार
तिम्रो मिशन के हो? हामी आवाजका प्रभुहरूको जन्म र उत्कृष्ट संगीत लेख्न थालें। वैसे, के तपाईं जान्दथे कि यदि तपाइँ हाम्रो गीतहरु लाई फिर्ता जान्छ भने, तपाईं देवताओं देखि संदेश सुनेगा?
भीड तपाईंलाई प्रशंसा गर्दछ, तपाईंको गोप्य के हो? हामी हाम्रा साना बच्चाहरु जस्तै प्रशंसकहरूलाई माया गर्छौं। जब हामी धेरै नजिक आइपुग्छौं, उनीहरूले हाम्रो लुगा लगाउन पनि सक्दछन्, आफ्नो टाउको सीधा ढोकामा लगातार सिर-पिङ्गको कारण र दूध भन्दा थोडा बलियो हुन सक्दैन।
हामीलाई एक मजेदार मामला बताउनुहोस् कि तपाईं गीग मा भयो। एकपटक हामी गम्भीर रूपमा मंचमा दाँतको मोर्चामा दाँतमा सेट गर्छौं, तर देख्नैपर्छ र हामी हाम्रो हिट घुमाई "मेरो टाउकोमा आगो छ"। यदि तपाईं यो महाकाव्य चाल आफ्नो आफ्नै आँखामा हेर्न चाहानुहुन्छ, Play'n Go द्वारा नवीनतम हिट्स मध्ये एकमा आफ्नो उपहार सक्रिय गर्नुहोस्:
जियो कैसीनोमा सबटोनमा 20 फ्रिडिन्स अपडेट गरिएको: जुन 24, 2019 लेखक: Damon
सम्बन्धित बोनस "जय क्यासिनोमा सबातनमा २० फ्रिस्पिनहरू":
पाउन्ड 4150 जम्मा जम्मा कैसीनो बोनस छैन
"जोसिनोमा सबातनमा २० फ्रिस्पिनहरू" सँग खेल्न सुरू गर्नुहोस्।
सबातनमा 20 फ्रिस्पिनहरू ...